Indawo yokubhaka ngqo kwiLake Plön
Indawo yethu yokubhaka ibekwe ngokuthe ngqo kwiLake Plön, ifakwe kwintendelezo kunye nekhaya leeholide le-Nehmten estate eSchleswig-Holstein entle. Indlu imalunga ne-90 yeemitha zeskweri kwaye inikezelwe ngokuqwalasela okukhulu kwiinkcukacha, ukuze uzive ukhululekile kulo lonke ixesha lonyaka. Kwi-terrace ngombono othe ngqo we-echibi, ungaqala usuku ukhululekile kwaye uphumle. Ezinye amagumbi amabini amahle eholide ongeziweyo ukusuka ngoJuni ka-2021.
Indlu yokubhaka inamagumbi okulala amathathu kwaye yenzelwe abantu abahlanu. Ungena kwindawo yokubhaka ngekhitshi lokutyela, ukuze kubekho umoya opholileyo owamkelekileyo. Ikhitshi-cum-igumbi lokuhlala likumema ukuba uhlale. Igumbi lokuhlala linendawo yomlilo enkulu kunye neengcango ezimbini zepatio ezikhokelela ngaphandle. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini eyi-1.60 m kunye negumbi elincinci leshawari elinendlu yangasese. Izinyuko ezijikelezayo zikhokelela kumgangatho ongaphezulu. Kukho igumbi lokulala elinombono wechibi kunye nebhedi yebhokisi ye-1.80 m. Kukho iibhedi ezimbini zebhedi enye kwigumbi lokulala lesithathu. Ilinen yokulala kunye neetawuli zinikezelwa. Kukho iWiFi kunye neTV kwindawo yokubhaka. Impahla inokuhlanjwa kwigumbi lokuvasela ekwabelwana ngalo xa kuceliwe.
Kukho indawo yolwandle eLake Plön kunye nendawo yokosa inyama yazo zonke iindwendwe zethu. Amanzi alungele ukuqubha kunye nokuhamba ngephenyane ehlotyeni. Kwiindwendwe zethu sinesiqithi sokuhlamba echibini, ukusuka apho unokutsibela emanzini okanye ube nepikiniki ngokuhlwa kwelanga. Iiholide njengaseBullerbü.
Siyinkampani esebenzayo yezolimo nezamahlathi esele iphantsi kosapho iminyaka engaphezu kwama-250. Efama kukho isitali sokukhwela esinamahashe amangalisayo. Kukho nenkampani encinci yeponi kwindawo kwaye ukuba unomdla ungathatha izifundo zokukhwela ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ubhalisa kwangaphambili. Siyavuya ukuthumela isicelo.
Sihlala kwi-estate enkulu ngokwethu kwaye sihlala sifumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nehmten